Siyaasiyiinta Raxanweyn | allsanaag
Waa maxay sababta Digil iyo Mirifle ay ula doonayaan in Daarood qabto Kursiga baarlamaanka?
Boqolka Xildhibaan ee aan kala harin, oo codkoodu halka meel wada maro ama meel u wada guuro ee beesha Digil iyo Mirifle iyo Baarqabkooda Shariif Xasan, ayaa qaar ka mid ah siyaasiyiinta beesha Daarood u balan qaaday in codkooda ay wada siin doonaan haddi ay u tartamaan Gudoonka baarlamaanka Soomaaliya?
Siyaasiyiinta Beesha Raxanweyn ee aan codkoodu kala harin iyo Baarqabkooda Shariif Xasan, ayaa Doorashooyinkii hore ee Soomaaliya ka soo qabsoontay ee loogu tartamayey qofka qabanaya madaxweynaha Soomaaliya, aan marna codkooda siin siyaasiyiintii ka soo jeeday Beesha Daarood ee tartamaysay . Doorasho walbana waxay u codaynayeen siyaasiga Hawiye. Waxay codkooda oo aan kala harin ay har cad ku reebeen Maslax Siyaad Bare oo Sheekh Shariif la tartamayey iyo Cabdiweli Gaas oo la tartamayey Xasan Culusoow
Xildhibaanada Beesha Digil iyo Mirifle ee aan kala harin ee Baarlamaanka Soomaaliya, ayaa hor boodayey oo ku dhiiranyey inay baarlamaanka Soomaaliya hor keenaan dhowr mooshin oo laga keenay Ra’isawasaarayaal Soomaaliyeed oo ka soo jeeday Beesha Daarood. Waxaana ugu danbeeyey Ra’isawasaare Cabdiweli Sheekh iyo RW Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid
Xildhibaanaddii Raxanweyn iyo Baarqabkoodii, markii intaas oo fal ay soo sameeyeen, oo aan mid ka mid ah aan lagula xisaabtamin ama aan loo sheegin in la ogyahay dhaqankooda cuqdadda ku salaysan , ayaa maanta waxay la soo shir tageen inay yiraahdaan Siyaasi ka soo jeeda beesha Daarood ma qaban karo xilalaka ugu sareeya Soomaaliya. Madaxweyne iyo Ra’isawasaare toona.
Maaha Dimoqraadiyad iyo Doorasho toona , Arinta Shariif Sakiin wada isaga oo kaashanaya 100 Xildhibaan ee uu ku helay 4.5 xaaaraanta ah .Arintaas oo ah Si Daarood labada kursi ee Soomaaliya ugu sareeya u qaban waa in aan inagu hadaynu nahay (Raxanweyn) aan keensanaa nin Daarood ah oo isu soo sharaxa Gudoonka Baarlamaanka Soomaaliya . Si marka Daarood xilkaa Gudoonka u helo ay u waayaan Madaxweyne iyo Raisawaasaare
Ugu danbayntii intaas arimood oo aan kor ku soo sheegnay waxa dheer in siyaasiyiinta ka soo jeeda beeshaa Raxanweyn sida Xaabsade, Nuunoow iyo Jawaari inta ay warbaahinta soo hor istaageen marar badan , iyaga oo been sheegaya oo beentooda ku celcelinaya ay yiraahdeedn ” Dadkayaga ayaa lagu xasuuqaa ama lagu gumaadaa Puntland. Hadaba nimankii noocaas ahaa, oo Soomaalinimo cuqdadda ka doortay, ayaa maanta doonaya in Soomaaliya madaxweyne ka noqdaan. Qof kasta oo caqli leh waa garan karaa waxay xilkaas u doonayaan Nuunoow, Sakiin iyo Xaabsade
← Sawirada Jaamacadda Maakhir ee Puntland Midnimada Ummadda”. →